Inkcubeko yokufunda entsha - i-Geofumadas
Inkcubeko entsha yokufunda
Agasti, 2012 ezintsha
Ndisoloko ndifunda aba bamelwane babhala ngokulangazelela okukhulu, kwaye esi sihloko ibe yenye yezintandokazi zam kule veki. Ndingathanda ukongeza, kodwa ngokuqinisekileyo kungasusa ubukhali obubhalwe ngalo, ukusenza ukuba sicabange ngombandela obume obunokubangelwa kukuzivelela kwetekhnoloji.
Iminyaka eyi-30 eyadlulayo, imfundo yomgama yaphakanyiswa ngezentengiso kwiimagazini, apho izifundo zobugcisa zinokufunyanwa ngeposti, uninzi lweekhasethi okanye iidiski. Ngoku uqeqesho oluthembekileyo lungafunyanwa kubumfihlo beselula, thatha ithuba lokufa njengohambo lokubuyela ekhaya phakathi kwezithuthi okanye kwindlela ehamba phambili. kwaye nangona le nguquko ivumele ukufikelela kumanqanaba ebefudula eyintsomi yesayensi, umceli mngeni wokuziqeqesha kunye noqeqesho luqine ngokubanika ubungakanani obuphazamisayo benani lolwazi apho ungafundanga kufundisa izihloko.
Kule veki iphelileyo sithathe inxaxheba njengomboniso weVirtual Cadastre Symposium, kunye nababukeli kwicala elisecaleni, belinde ixesha elihamba ngaphandle kokucela imvume kunye nezimvo kwisakhelo esisezantsi. Ukusuka kwidesika ekumgama ophakathi kwiphondo liphela siye sakwazi ukubonisa ababonisi ngee-PowerPoint zemiboniso ngee-pointers, ii-autoforms kunye neevidiyo. Ngokuqinisekileyo, ukufunda kunokubangela ithuba lokuxhaphaza.
Ngaphandle kokuqhubeka ngakumbi, ndiyishiya inqaku lencwadi.
Inkcubeko yokufunda entsha ukuziqhelanisa notshintsho kwaye ujonge iindlela ezintsha zokufunda ngokwenza izinto ezintsha, hlakulela umbono kwaye ufunde ngokwenza. NgokukaNjingalwazi uDouglas Thomas, eyona njongo yakhe kukufumana ulungelelwaniso phakathi kwesakhiwo seziko nenkululeko yomntu ngamnye. Okwangoku, izindululo zokufunda ezintsha kunye neeprojekthi ziqala ukusebenzisa izixhobo zetekhnoloji kwiimeko ezingezizo zesiko.
Utitshala UDouglas Thomas, umphumelele kwiDyunivesithi yaseMinnesota kwezoNxibelelwano kunye nomnxibelelanisi wencwadi "Inkcubeko yokufunda: ukuhlakulela umbono wehlabathi elinotshintsho oluqhubekayo" ichaza inkcubeko yokufunda entsha njenge:
Fumana iindlela ezintsha zokufaka kwaye uthathe ithuba lokucinga kwihlabathi eliguqukayo.
URachel Smith, uMcebisi oMkhulu kunye noMlawuli weeNkonzo zokuHanjiswa kweDijithali kwiGrove Consultants International, inkampani ezinikele kwimisebenzi yokubonakalayo kunye nophuhliso lweqela ichaza inkcubeko yokufunda entsha ekusebenziseni imidlalo kunye nezixhobo ezibonakalayo:
Kwenzeka xa abafundi bayo yonke iminyaka bengathatha amathuba emidlalo, izixhobo ezibonakalayo kunye namava asebenzayo ukomeleza ukuqonda.
Ootitshala abasebenzisa itekhnoloji njenge isixhobo sokuphucula iikhosi zakho Banethuba lokubamba ingcinga zabafundi babo. Ngaphakathi kule nkcubeko intsha sibona ikhula amandla okufunda inxulumene nokusetyenziswa kwe-Intanethi, izixhobo zeselfowuni, izixhobo kunye nezixhobo zemithombo yeendaba ezininzi ezicebisa ngemodeli evulekileyo nehambelanayo yokusetyenziswa kolwazi.
IIPROJEKHALI ZEMFUNDO YABADALA
Khan Academy Luyindawo yokugcina izixhobo zokufundisa zevidiyo. Umphuhlisi UDavid Hu, yayinguye ophakamise waze waphunyezwa kwiprojekthi "iModeli yokuFunda iModeli yokuFunda iModeli eNtsha" ukuvavanya ukufunda kwabafundi kunye nokuba bona ngokwabo banokuhlalutya inkqubela yabo kunye / okanye ubunzima ngaphakathi kwenkqubo yabo yokufunda. UDavid uthi inkcubeko yokufunda entsha iyenzeka:
Xa abafundi bezimele kwaye benomdla wokuzama ukuphendula imibuzo yabo, apho umfundi angaqondi khona kuphela, kodwa nesizathu.
IMejorando.la sesinye isicelo sokufunda kwiitekhnoloji zophuhliso lwewebhu. UChristian Van der Henst noFreddy Vega, abasunguli beprojekthi, bafundise zifundo kwaye baququzelela iinkomfa kumazwe aliLatin America njengenxalenye yefilosofi yokwabelana ngolwazi nomntu nangokusasaza okuvulekileyo. Ngokuka-Van Der Henst, okwangoku basebenza kwisindululo esitsha semfundo:
Ngamava ethu okufundisa kwi-Latin America, sigqibe kwelokuba siphuhlise iqonga elisivumela ukufikelela kubantu abaninzi.
UChristian Van Der Henst uthi zininzi izinto onokukhetha ukuzithengisa kwimarike yemfundo ye-Intanethi, kodwa zisekhona iziphakamiso ezingasinikezi umxholo kuphela kodwa kunye namava okufunda kunye nolwalamano olunomdla.
USETYENZISO LWEZOBUCHWEPHESHE KWI projekthi
UPedro Ramírez noAlicia Sully, bayinxalenye ye Yintoni ekuchukumise ixesha elide kangaka, iprojekthi eyenza iividiyo kwisiseko se-NGOs, amabali angachazwanga kunye namaqhawe angaziwayo kwiimbombo zomhlaba ezikude kakhulu.
Ngaphandle kweziteshi ezifana neYouTube, iVimeo kunye nokusetyenziswa kweeSocial Media ngekhe sibe nabaphulaphuli esinabo namhlanje. Ukongeza, isivumela ukuba sikwazi ukunxibelelana nabantu kwihlabathi jikelele kwaye sabelane ngamava.
Babanga ukuba iVidiyo yeNtlalontle kunye nevidiyo ye-Intanethi ikuvumela ukuba unxibelelane ngendlela engathandekiyo kumabonwakude okanye kumatshini obhaliweyo.
Ngaba itekhnoloji inokuvuselela imbali?
Ukuyifunda ngokupheleleyo, ndincoma ukuba ubone inqaku kwiiMasters zeWebhu.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-Kiva, ukusetyenziswa kobuchwephesha kunye neentlawulo ezincinci ukuzuza amaninzi
Post Next Ikhosi ye-GvSIG isetyenziswe kuCwangciso loThuthoOkulandelayo "
I-2 iphendula "kwinkcubeko entsha yokufunda"
Zingwevu zeenwele ezingwevu.
Ayizukubanomdla ukubonisa idilesi yekopi